Midhiyamu Inobhadharwa, Yakabhadharwa uye Inotambirwa Martech Zone
Zvemukati zvekusimudzira zvinoenderana nematanho matatu ekutanga - midhiya yakabhadharwa, midhiya ine yavo uye midhiya yakawanikwa
Kunyangwe aya marudzi enhau asiri matsva, ndiwo mukurumbira uye maitiro kune vane uye vakawana midhiya izvo zvachinja, zvichipesana neyakajairika midhiya inobhadharwa. Pamela Bustard, Iyo Media Octopus
Yakabhadharwa, Yakabhadharwa uye Yakawanikwa Midhiya Tsananguro
Zvinoenderana neMedia Octopus, tsananguro idzi ndedzekuti:
Paid Midhiya - Chero chinhu chinobhadharwa kutyaira traffic kune zvivakwa zvemidziyo zvivakwa; iwe unobhadhara kusimudzira kuratidzwa kwako kuburikidza negero.
Muridzi weMedia - Chero chero chiteshi chekutaurirana kana chikuva chiri cheshoko rako raunogadzira uye une simba pamusoro paro.
Yakawana Midhiya - Kana vanhu vachitaura pamusoro uye vachigovana marashi yako uye chigadzirwa chako, kungave mukupindura zvemukati iwe zvawakagovana kana kuburikidza nekuzvidira kutaura. Iyo yemahara yekushambadzira inogadzirwa nemafans.
Ini ndaizowedzera kuti kazhinji kunowirirana pakati pemaitiro. Isu tinowanzo rova ​​mushandirapamwe wevatori venhau nekuwana kugoverwa kwevanhu vazhinji kuburikidza nemari inobhadharwa. Iyo vanobhadharwa midhiya masosi anounza zvirimo, asizve zvimwe nhepfenyuro masosi kuitora uye wana zvimwe zvakawanda zvinotaurwa kuburikidza nemikana yemagariro.
Tags: yakawana midhiyayakawana midhiya tsananguronhepfenyurotsanangudzo yemidhiyavanobhadharwa midhiyayakabhadharwa midhiya tsanangurokubhadharwa kunowanikwa